म्यानचेस्टर सिटीलाई युरोपमा प्रतिबन्ध! - चौतारीपोष्ट अनलाईन
म्यानचेस्टर सिटीलाई युरोपमा प्रतिबन्ध!
एजेन्सी – इंग्लिस प्रिमियर लिगको म्यानचेस्टर सिटीलाई युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च संस्था यूईएफएले दुई वर्षका लागि युरोपेली प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सिटीले यूईएफएको क्लब लाइसेन्सिङ तथा फाइनान्सियल फेयर प्लेको नियमको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पाइएको थियो । जसकारण सिटीलाई दुई वर्ष प्रतिबन्धसँगै ३० मिलियन युरो जरिवाना समेत गरिएको छ । सिटीले यस विषयलाई कोर्ट अब आर्बिट्रेसन फर स्पोर्टमा अपिलको लागि पुर्याएको छ । सिटीले यस किसिमको सजाय पाउँदा अचम्मित नभएको बताउँदै अपिल गर्ने बताएको छ ।
सिटीले सन् २०१२ देखि २०१६ को बिचमा क्लबलाई आएको प्रायोजन र लेखा परिक्षणबारे अनुसन्धान गर्न खोज्दा समन्वय नगरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबेला सिटीले प्रायोजन गरेभन्दा बढी रकम लेखा परिक्षणमा राखेको आरोप लागेको छ । यस कारवाहीसँगै सिटीले अर्को सिजनदेखि दुई वर्ष च्याम्पियन्स लिग र युरोप लिगमा सहभागिता जनाउन पाउने छैन ।
यूईएफएको कारवाहीमा परेको सिटी प्रिमियर लिगमा पनि कारवाहीमा पर्ने सम्भावना छ । प्रिमियर लिगमा भने पोइन्ट घटाएर कुनै टोलीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान छ । यसबारे प्रिमियर लिगले पनि छिट्टै आफ्नो निर्णय सुनाउने छ ।hamrokhelkud
Prevसरकारका दुई वर्ष : ३ मन्त्री फेरिए, स्वास्थ्यका उपलब्धि निराशाजनक
Nextदक्षिण अफ्रिकामाथि इंग्ल्यान्डको रोमान्चक जित